Sidee lagu ogaada marka uu CAREYSAN/XANAAQSANYAHAY Lionel Messi? – Gool FM
(Barcelona) 18 Okt 2018. Daaficii hore ee Barcelona iminkana ah Agaasimaha Ciyaaraha ee kooxda Eric Abidal ayaa daaha ka rogay sida uu Lionel Messi saaxiibadiisa Kooxda ugu gudbiyo marka uu Careysan yahay.
Maadaama uu laacibka reer Argentina ahayn shaqsi hadal badan misane wuxuu garanayaa sida uu saaxiibadiisa kooxda u dareensiiyo marka uusan faraxsanayn.
Messi oo lagu sheego mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican ebid taariikhda kubbada cagta adduunka ayaa ku qaatay Nou Camp in ka badan 10-sano iyadoona ugu dambeyn sanadkaan loo Magacaabay Kabtanka koowaad ee kooxda kaddib markii uu tagay Iniesta.
“Messi Waa tusaale kabtan ahaan,” Abidal ayaa sidaa u sheegay bogga Rasmiga ah ee Barcelona.
“Ma ahan oo kaliya inuu Tusaale u yahay dhanka xirfada ee sidoo kale shaqsi ahaan.
“Ma hadal badna, laakiin wax kasta wuxuu nagu tusiyaa Garoonka, Ciyaaryahan Muhiim ah ayuu inoo yahay iyo qolka dharbadelashada.
“Markasta waxaan dhahnaa in Messi uusan u baahneyn inuu hadlo. Qofkasta wuu ogyahay marka uu Careysanyahay iyo marka uu Faraxsan yahay.
“Doorkiisa kooxda waxay muhiim u tahay ciyaartoyda da’da yar iyo Saxiixyada Cusub.
“Sheekada Messi waa mid qurux badan, Wuxuu midaa ku muujiyay halkan Barcelona, isagoo bixiyay shaqo adag, waxyaabo badan ayaa suuro gal ah.”.
DEG DEG: Benaadir oo ku guuleysatay Koobka Jenaraal Daa'uud...+SAWIRRO